Naya Drishti | मंसिर सम्झीदा त बिहे गर्दिम कि जस्तो लाग्छ - Naya Drishti मंसिर सम्झीदा त बिहे गर्दिम कि जस्तो लाग्छ - Naya Drishti
मंसिर लाग्यो भने बिबाह गर्न योग्य भएका, उमेर पुगेका युवायुवतीहरू लाई विभिन्न तरिकाले जिस्काउने, छेड हान्ने दबाब दिने र उत्साहित गराउने गरिन्छ । सोधिन्छ- “बिबाह कहिले गर्ने ? यो मंसिर यत्तिकै जानु हुदैन है ।”
यद्यपि बिबाह बारे खासै खुलेर कुरा नगर्ने र यसलाई लज्जाको बिषय जस्तो ठान्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय फोन, सामाजिक संजालको माध्यमको प्रभावले कम उमेरमा बिबाह गर्ने र उमेर पुगेपछि छुट्ने प्रसस्त घटनाहरू देखिने गरेका छ्न भने मायाप्रेम र बिबाह बारे थुप्रै भ्रम पनि रहेको पाइन्छ ।
यसै सन्दर्भमा नयाँ दृष्टि डटकमले मंसिर, प्रेम र बिबाहबारे विभिन्न क्षेत्रमा सफल तथा कृयाशिल अविवाहित ब्यक्तित्वहरू सँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, लोकप्रिय अनलाइन पत्रीका लेकाली अनलाइनका संचालक/ संपादक युवा पत्रकार खकेन्द्र केसीसँग गरिएको रमाइलो कुराकानीको सम्पादित अंश ।
तपाइले गरेको प्रश्नमा मेरो बिहे यो बेला हुन्छ भनेर त्यस्तो कुनै समयको पनि टुंगो लागेको छैन् । आशा गरौं बिहे छिटै होस् । म कर्मले सदरमुकाम भएपनि बेलाबखत घर जाने गर्छु ।
घर गएको बेला आमाबुबा र छिमेकी आफन्तहरुले अब त बिहे गर्नुपर्यो भनिराख्नु हुन्छ । गाउँमा मेरो उमेरका सबैले बिहे गरेर पनि होला उहाँहरुको यो जोडबल हुन्छ ।
कक्षा १० पढ्दा केटिहरुसँग खासै बोल्दैन थिए
अझ प्रेमको कुरा त परै छ । जब एसएलसी पास गरेपछि +२ पढ्न अध्ययनको लागि दाङ गइयो । त्यहाँ विस्तारै सामान्य प्रेमका कुराहरुतिर प्रवेश गरियो ।
केहि केटीहरुलाई प्रेम प्रस्ताव
यस्तो होस् जीवन साथी
साथीहरूले लमीको काम गरेपछि……..
मंसिर, प्रेम र बिबाहका सन्दर्भमा नयाँ दृष्टि डटकमले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सफलता हाँसिल गरेका ब्यक्तित्वहरू सँग कुरा गरेका छौँ । प्रस्तुत छ – नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य, पत्रकार टेकराज शाहीसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी ।
हाम्रो प्रेम विवाह हो । ओहो ! प्रेमको कुरा गर्दा तपाईले बिर्सन लागेको कुरा सम्झाई दिनुभयो । खासमा म त्यतिवेला गाँउवाट आएर खलंगामा वस्थे । मेरो श्रीमति उहाँ चाही जागीर गर्नुहुन्थ्यो । उहाँ सँगै काम गर्ने मेरो साथी पनी हुनुहुन्थ्यो उहाँ सगै उहाँको कार्यलय जान्थे त्यहि चिनजान भयो । चिनजान सँगै एकले अर्कालाई मन परायौ होला सायद अलि वाक्लो भेटघाट हुन थाल्यो ।
त्यतिवेला मोवाईल फोन,सामाजिक संजाल अहिलेको जस्तो थिएन । साथीहरुनै लमीको काम गर्थे अथार्त उताको कुरा यता यतको कुरा उता गराउने । साथीहरु मार्फत कुरा आदानप्रदान भयो । यो प्रकृया खास लामो चलेन करीव ६ महिनामै हामी विवाह वन्धनमा वाधियौ ।
अविवाहित मानिस अस्तव्यस्त
उमेर पुगेपछि गरीएको विवाहले व्यत्तित्व विकासका र प्रगतिका लागी विवाहले रोक्दैन बरु प्रगतिका ढोका हरु अझ वढि खोल्छ भन्ने मेरो धारणा मात्र हैन अनुभव पनी हो ।
बिहेपछि बढी जिम्मेवारी
बिबाह कानुनले तोकेको उमेर पुगेगपछि र आफुले आफनो लागी केही पेशा व्यवसाय सुरु गरी परीवारका अन्य सदस्यामा आर्थिक भार नपर्ने गरी गर्नु नै उपयुक्त वेला हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
कानुनले वन्देज गरेको उमेर बिहे गर्दा त्यसले फाईदा होईन वेफाईदा नै हुन्छ । ढिलो भनेको चाही आफु व्यवहारीक हिसावले र अध्ययन सकेर गर्दा मान्छेको जिवनमा आउने हरेक समस्या लाई डिल गर्न सहज हुन्छ त्यसैले ठिक्कको उमेरमा विहे गर्दा राम्रो हुन्छ ।
बिबाह : बन्धन कि उर्जा ?
यो मंसिरको महिनामा वन्धन नै हो भन्दियो भने कतिले विहे गर्न पक्का गरेको सहमति नै तोडर भाग्लान भन्ने डर । खासमा विहे दुवैजनाको मन मिल्यो, मन सँगै व्यवहार मिल्यो अनि एकले अर्काको काम र व्यवहार लाई वुझ्न सक्ने हो भने विवाह उर्जा नै हो ।
#खकेन्द्र #प्रेम कथा